Yini i-lactic acidosis kushukela nokuthi ungayiphatha kanjani > Ukwelashwa nokuvimbela
Izimbangela, izimpawu, ukwelashwa kwe-lactic acidosis kushukela
Ngokwe-metabolism ejwayelekile, i-lactate (okuvela ku-lactic acid) ne-pyruvate (okuvela ku-nepruvic acid) empeleni zikhona egazini. Bahambelana 1:10. Ngomzimba ongasebenzi kahle, okuqukethwe kwe-lactate kukhulisa okuphindwe kathathu noma ngaphezulu, futhi kubangele i-metabolic acidosis, ekwandiswe yi-hypoxia. Indlela yegazi iguqukela ohlangothini lwe-acid, ekhulisa ukumelana kwe-insulin, okuthi nayo ithuthukise ukwakheka kwe-lactic acid. Kwakhiwa “umbuthano onobubi”.
Lesi simo sicaphukisa ukubola okusheshayo kwe-pyruvic acid ngenxa yokuntuleka kwe-insulin. Leli qiniso libamba iqhaza ekwakhekeni kwe-lactic acid eyedlulele, eyingozi kakhulu empilweni.
Ngaphezu kwalokho, ngokwanda kwe-insulin, ama-hormone ama-contra-hormonal abhekene ne-carbohydrate metabolism aqala ukukhiqizwa ngentshiseko, okuhlanekezela imetabolism yamafutha futhi kukhuphule izinga lama-asidi wamahhala. Le nqubo ithinta kabi uhlelo lwangaphakathi lwezinzwa futhi ibangela nezimpawu ze-neuropsychiatric.
I-intoxication, i-acidosis kanye nokulahleka komswakama kuholela ekwakhiweni kwesifo sikashukela. I-intoxication ikhuliswa yi-metabolism engajwayelekile, enomthelela ekubonakala kwe-hyperazotemia (iphesenti elikhulayo lemikhiqizo ye-metabolic egazini).
ukucekelwa phansi kwemizwa
ukwanda komsebenzi wezinzwa ophakeme.
Nge-lactic acidosis, umsebenzi wokuphefumula uyawohloka (ukuphefumula kweKussmaul)
Ngayinye yalezi zigameko ingadala ukufa.
I-Lactic acidosis yohlobo 2 lwesifo sikashukela ivela, njengomthetho, ngokuhlanganiswa kwezinto eziningana, okubandakanya:
ukukhiqizwa okwandayo kwe-lactic acid ngenxa yokusebenzisa ama-Biguanides (amaphilisi anciphisa ushukela wegazi), ukubulawa okunamandla kwesifo sikashukela, i-acidosis yomsuka ohlukile,
ukuncipha kokuvunyelwa kwe-lactic acid ngotshwala, i-pathologies yesibindi,
ukwehla ngasikhathi sinye kokuvunyelwa kwe-lactic acid ne-biguanides uma kwenzeka umsebenzi wokuphazamiseka wezinso noma ukuphathwa kwe-intravenous kwezinto ze-radiopaque,
izicubu hypoxia njengokwehluleka kwenhliziyo, isifo senhliziyo, i-pathologies emithanjeni yethambo, izifo zohlelo lokuphefumula, i-anemia yezinhlobo ezahlukahlukene,
isethi yezizathu ezidonsela ukunqwabelana kwe-lactic acid (ukuwohloka kwesimo esijwayelekile somzimba, i-neoplasms enobungozi, ukucindezeleka okukhulu, izinkinga zesifo sikashukela, iminyaka yobudala obungaphezulu kuka-60, ukulimala kanzima, izifo ezihambisanayo zemvelo yokutheleleka noma ukuvuvukala, ukopha, ingculaza, njll.),
ukuntuleka kwe-thiamine emzimbeni (uvithamini B 1).
Ukukhulelwa nakho kuyimbangela ye-lactic acidosis kuhlobo 2 sikashukela
Akunakwenzeka ukubikezela ukuvela kwale nkimbinkimbi; zonke izimbangela zihlobene. Uma isiguli sisengozini, kuyadingeka ukuthatha i-metformin neminye eminye imithi ngokuqukethwe kwayo.
Izimpawu ze-lactic acidosis zivele ngokuzumayo, zikhule kungakapheli amahora ambalwa futhi ziholele emiphumeleni engenakuphikwa ngaphandle kokuthola usizo lwezokwelapha ngesikhathi. Kulesi simo, akukho zanduleli eziqashelwayo.
Okuwukuphela kwesibonakaliso sokuqala esiyingqayizivele kwe-lactic acidosis kubuhlungu bemisipha (myalgia), lapho kungekho mzamo omkhulu womzimba. Izimpawu ezisele ezikhulayo esigabeni sokuqala se-lactic acidosis zingase zibe ezilandelanayo ekuphazamisekeni kwezempilo okuhlukahlukene.
ama-syndromes ebuhlungu esiswini,
isifo sohudo, ukugabha, ukushisa kwenhliziyo,
ukubambezeleka kokukhipha umchamo noma ukuqeda ngokuphelele,
ukozela noma, ngakolunye uhlangothi, ukuqwasha,
umuzwa wobunzima ngemuva kwe sternum.
Isikhumba esomile singakhombisa i-lactaciadosis
Amazinga we-lactate akhula ngokushesha, okuholela futhi:
i-hyperventilation enconsisayo ngenxa ye-tishu hypoxia. Lokhu kuholela ekubonakaleni kokuphefumula okunomsindo, okungazwakala kukude ngamamitha ambalwa, kwezinye izimo kuphenduka ukububula (Ukuphefumula kukaKussmaul). Uma ukhipha, iphunga le-acetone alenzeki,
ukwehluleka okukhulu kwenhliziyo, okungenakusetshenziswa ngezindlela ezijwayelekile. Kunokwehla okubukhali kwengcindezi yegazi. Isimo sikhulu ngesigqi senhliziyo esiphazamisekile, okungaholela ekuqhekekeni nasekuwohlokeni kwe-myocardial,
ukungavikeleki kwemisipha okungahleliwe kuholela kumaqhubu,
ukuntuleka komoya-mpilo kanye noshukela osebuchosheni kuholela ekubuthweni kwemizwa. Ukuvela kwe-excitability okwandayo (hyperkinesis) noma i-paresis kuyabonakala. Iqoqo lokunaka liyaphazamiseka. Isimo se-delirium sithathelwa indawo yi-stupor,
i-intravascular coagulation (DIC). Lolu phawu luyingozi kakhulu. Ngisho nangemva kokumisa izimpawu ze-lactic acidosis, izingxenyana zegazi ziyaqhubeka nokuhamba ngohlelo lokujikeleza kwegazi, okungaholela ku-thrombosis (ukuqhuma kwemithambo yegazi). Lokhu kugqame ngokubonakala kwe-necrosis yeminwe yezitho nezitho zomzimba emadodeni. Lokhu kudalwa komoya kukhuthaza ubuthi, futhi nokukhishwa okulandelayo.
Isimo somtholampilo se-lactic acidosis sifana nezimpawu zemiphumela ye-pathological emzimbeni we-methanol, acetic acid, salicylates, kanye ne-ketoacidosis.
Kumele kukhunjulwe ukuthi usizo lokuqala lokutholakala kwezimpawu ze-lactic acidosis luqukethe ukwelashwa okuphuthumayo kwesiguli. Lapho kwenzeka ukuthi kubuhlungu izinhlungu zemisipha, kukalwa amazinga kashukela, futhi ngokuwohloka okubukhali empilweni, kubizwa i-ambulensi. Ukuzelapha ngokwakho ezinkingeni kuzoholela emiphumeleni emibi.
Ukuxilongwa kwe-lactic acidosis kwenziwa kuphela esikhungweni sezokwelapha futhi kubandakanya:
Umlando uthatha ngokuxoxisana nesiguli noma nabantu abahamba naye.
Ukutadisha kwezimpawu zesimo se-pathological.
Ukuhlolwa kwegazi okulinganisa izinga le-lactic acid, igebe le-anion, futhi kuhlole nesimo se-acid-base.
Nge-lactic acidosis, izinga le-lactic acid esegazini kufanele libe ngu-2.2-5.0 mmol / l, i-pH esegazini akufanele ibe ngaphezulu kuka-7.25. Ukuxilongwa kuqinisekiswa izinga elincishisiwe le-bicarbonate elingaphansi kwe-18 meq / l kanye nesikhathi sokukhula kwe-anionic (umehluko ekugxambeni phakathi kwe-sodium nenani le-chloride ne-bicarbonates) elingaphezu kwe-16 meq / l.
Futhi, isifo sikashukela se-lactic acidosis sihlukile nge:
i-ketoacidosis, lapho iphunga ngayo i-acetone evela emgodleni womlomo kanye nokubonakala kwe-hyperketonemia ne ketonuria,
i-uremic acidosis, ebonakala ngeleveli ekhuphukayo ye-creatinine egazini (ngaphezulu kwe-180 μmol / l).
Ukuxilongwa kwe-lactic acidosis kufanele kwenziwe ezingeni lochwepheshe.
Esibhedlela, kubalulekile ukuqeda i-hypoxia ne-acidosis ngokushesha okukhulu.
Ukushintshwa kwe-pH esegazini kwenzeka ngokuphathwa kwe-sodium bicarbonate. Ngokuhambisana, okuqukethwe kwe-potassium egazini, kanye namanani we-pH ayaqashwa. Lesi sidakamizwa singadala imiphumela emibi, kuze kufike ku-edema yamakhemikhali. Ngalesi sizathu, le ndlela ibuyiselwa emuva lapho i-pH ingaphansi kuka-7.0, umthamo wesidakamizwa akufanele ube ngaphezu kwamalitha ama-2 ngosuku.
Ukuhoxisa isiguli ku-coma, kusetshenziswa izidakamizwa i-trisamine ne-methylene eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ukuqedwa kwe-hypoxia kungenziwa kusetshenziswa i-oxygen therapy, kanye nomoya omncane wokuphefumula.
Ngokungeziwe ekwelashweni kwe-insulin kudingekile, kwenziwa kakhulu i-insulin.
Uma isiguli sisebenzisa ama-biguanides ngokushesha ngaphambi kokuqala kwenkinga, siyogeza isisu saso bese sikunikeza ama-enterosorbents (i-carbon eyenziwe isebenze, njll.). Kwezinye izimo, i-hemodialysis isetshenziselwa ukusheshisa ukuhoxiswa kwe-lactic acid.
Ngezinyathelo zokulwa nokuthuthumela, kusetshenziswa izixazululo eziguqula i-plasma kanye nama-adrenergic agonists (Dopamine, Norepinephrine, njll.).
Imithamo emincane ye-heparin iqeda i-DIC.
Izici ezingeziwe ezinomthelela we-lactic acidosis (izifo ezinzima, i-anemia, njll) nazo ziyaqedwa.
Ukuxhumana njalo nodokotela kunciphisa ingozi yezinkinga zesifo sikashukela
Uhlobo lwesibili sikashukela yisifo esidinga ukubhekwa njalo kwempilo yakho:
uhlolwa njalo ngudokotela,
ungazenzisi. Yonke imithi kumele ithathwe kuphela ngokubonisana nodokotela. Ngaphandle kwalokho, ngokweqile kwabo, ukukhiqizwa ngokweqile kwe-lactic acid kungahle kubonwe,
thatha izinyathelo ezidingekayo zokugwema izifo ezibangelwa amagciwane,
qapha ushintsho esimweni sempilo lapho usebenzisa ama-biguanides,
landela ukudla, ukwenza ngokomzimba kanye nokusebenza kwansuku zonke,
lapho kuvela izimpawu eziphazamisayo, ngokushesha shayela i-ambulensi.
Kaningi, isiguli sifunda ngesifo sakhe sikashukela kuphela ngemuva kokuxilongwa kwe-lactic acidosis. Ukuhlolwa konyaka kuzosiza ukugwema isifo esiyingozi.
I-Lactic acidosis - iyini? Ungathola impendulo yombuzo ezintweni zokwakha ezikulo mbhalo. Ngaphezu kwalokho, imininingwane yokuthi yiziphi izimpawu zokuphambuka, izimbangela zokuvela kwayo nezindlela zokuphatha ezikhona zizokwethulwa ukunakwa kwakho.
Imininingwane ejwayelekile ngalesi sifo
Ngakho-ke, isihloko sengxoxo yethu yi-lactic acidosis. Kuyini futhi ukwelashwa kanjani? Lokhu kuphambuka lapho i-hyperlactacidemic coma icasukiswayo. Le nkinga isebenza kakhulu kwiziguli ezinesifo sikashukela. Ngemuva kwakho konke, ukunqwabelana kwe-lactic acid emzimbeni (esikhunjeni, ebuchosheni, emthanjeni wamathambo, njll.) Kungaqhubeka nokukhuthaza ukuthuthuka. Ngaphambi kokuqonda ukuthi ungakugwema kanjani ukunqwabelana okunjalo, kufanele ucabangele izimbangela eziningi zokuvela kwayo.
I-Lactic acidosis (izimpawu nokwelashwa kwalesi sifo kuzoxoxwa ngazo ngezansi) kungenzeka ngenxa yezimo ze-pathological ezifana:
izifo ezithathelwanayo nezivuvukelayo,
ukulimala kanzima emzimbeni
Phakathi kokunye, phakathi kwezici ezibangela i-lactic acidosis, indawo ekhethekile ithathwa yi-biguanides. Ngakho-ke, izidakamizwa ezinciphisa ushukela, noma kumthamo omncane, zingavusa kalula le nkinga, ikakhulukazi ngokulimala kwesibindi noma kwezinso. Kufanele futhi kuqashelwe ukuthi i-pathology ebhekelwa kaningi yenzeka nge-skeletal misuli hypoxia, ekhula ngenxa yokuqina komzimba isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, imbangela yalesi sifo kwezinye izimo yi-leukemia kanye nezinye izinqubo ezithile zamathumbu. Lokhu kufaka futhi ukwehluleka kokuphefumula kanye nokushoda kwe-thiamine emzimbeni.
I-Lactic acidosis: Izimpawu zesifo
I-Pathology ikhula ngokushesha futhi ihlanganisa wonke umzimba emahoreni ambalwa. Kumele kuqashelwe ukuthi ngaphambi kokuqala kwenkambo yesifo esibuhlungu, isiguli ngokuvamile asinazimpawu. Yize kunezimpawu ezithile okungaqondakala ngazo ukuthi kukhona ngokweqile egazini, lezi zimpawu zihlanganisa:
Ubuhlungu emuva kwe-sternum,
ukuqwasha noma, ngakolunye uhlangothi, ukozela.
Ngaphezu kwalokho, uphawu oluphambili lwalesi simo se-pathological lungabizwa ngokuthi ukwehluleka kwenhliziyo. Ngemuva kwakho konke, yilesi sifo esiyinkimbinkimbi ngenxa yokwanda kwe-acidity.
Izimpawu ze-lactic acidosis zivela kakhulu ngalesi sifo. Kulokhu, isiguli singazizwa sinomuzwa wokucanuzelelwa kwenhliziyo. Ngemuva kwesikhathi esithile, ukuhlanza kubonwa ezigulini, okuthi izinhlungu ezinzima zesisu zijoyine kancane kancane. Uma kwenzeka ukuthi kulesi sigaba umuntu angalutholi usizo, isimo sakhe siba sibi kakhulu. Esimweni esinjalo, isiguli siyayeka ukubona okungokoqobo. Uqala ukuphendula kancane ezenzweni zabantu abaseduze kwakhe. Kwesinye isikhathi isiguli siba nokuvela kwemisipha ehlukahlukene ngokungakhethi, ngenxa yokuvela kokuqhekeka, khona-ke amandla okugibela imoto abekezelwa buthaka.
I-harbinger ye-hyperlactacidemic coma ukuphefumula ngezikhathi ezithile. Kulokhu, akukho phunga elivela ngaphandle eliqashelwayo (ngokwesibonelo, njengase-ketoacidosis). Ngemuva kwalokho umuntu umane alahlekelwe ukwazi.
I-Lactic acidosis: ukwelashwa kwalesi sifo
Ngesifo esinjalo, ukwelashwa kufanele kuhloswe ukuqeda ngokushesha i-hypoxia ne-acidosis. Ukunakekelwa okuphuthumayo kufaka isixazululo se-intravenous (drip) se-sodium bicarbonate (4 noma 2,5%) kuze kufike kumalitha amabili ngosuku. Kulokhu, odokotela kufanele baqhubeke ngaphansi kokulawulwa okuqinile kwe-pH kanye namazinga e-potassium egazini. Ngaphezu kwalokho, ukwelashwa kwe-insulin okunamandla noma i-monocomponent insulin therapy kuphoqelekile ku-lactic acidosis. Njengezidakamizwa ezengeziwe, odokotela basebenzisa ama-carboxylases ama-intravenous (idrip) ngesilinganiso sama-200 mg ngosuku. Ukwethulwa kwe-rheopolyglucin, i-plasma yegazi, kanye nemithamo emincane ye-heparin, enomthelela kulungiswa kwe-hemostasis, nakho kuyahambelana.
Impendulo yombuzo: "I-Lactic acidosis - yini?" uyazi. Futhi ungazivikela kanjani izinkathazo ezinje? Izindlela zokuvimbela ukuvimbela ukuqala kwe-hyperlactacidemic coma ukuvimba kwe-hypoxia nokulawulwa kwesinxephezelo sikashukela. I-Lactic acidosis evela ekusetshenzisweni kwe-Biguanides idinga ukuqina okukhethekile ekuzimiseleni kwemithamo yomuthi ngamunye.
Imvamisa, lesi sifo sitholakala kulezi ziguli ezazingazi ngesifo sikashukela, ngenxa yokuthi lesi sifo saqhubeka ngaphandle kokwelashwa okudingekayo. Ukuvimbela ukuvela kwe-lactic acidosis, yonke imiyalo kadokotela oholayo kufanele ibhekwe ngokuqinile. Kuyadingeka futhi ukuthi kuqashelwe ukuguquguquka kwalesi sifo, ukuhlolwa njalo kwezokwelapha okugcwele, ukuthatha zonke izivivinyo futhi uthathe ukwelashwa okufanele. Uma kwenzeka noma yikuphi ukusola kwe-lactic acidosis, kufanele uthintane nodokotela we-endocrinologist ngaphandle kokulibala. Kungale ndlela kuphela ongavikela ngayo imiphumela emibi bese ususa izimpawu ezingezinhle ezihambisana nalesi sifo.
I-lactate yi-lactic acid, i-acidosis iyi-algorithm yokwandisa i-acidity. Ngakho-ke, i-lactic acidosis yakhiwa njengoba i-lactic acid iqongelela emzimbeni womuntu. Lesi simo siyingozi kakhulu kushukela, ngoba singavusa izinkinga eziningi, ngokwesibonelo, i-hyperlactacidemic coma. Ngokunikezwe lokhu kanye nokunye ukuxilongwa, kunconywa kakhulu ukunaka izimbangela, izimpawu, nezimpawu zokwelashwa kwe-lactic acidosis kushukela.
Yiziphi izimbangela ze-lactic acidosis?
Isimo se-pathological esiveziwe singenziwa ngenxa yezici ezahlukahlukene, isibonelo, izifo zesimo sokuvuvukala nesokutheleleka. Ngaphezu kwalokho, ukopha okukhulu, ubukhona botshwala obungamahlalakhona kanye ne-infarction ye-myocardial acute kubalwa njengezinto ezingabalulekile kangako. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe badonsela ukunakekela eqinisweni lokuthi ngohlobo 2 lwesifo sikashukela, kungaba nomthelela kulokhu:
ukuba khona kokwehluleka kwezinso,
ama-pathologies angamahlalakhona ahambisana nesibindi.
Isici esiholayo esidala ukwenzeka kwe-lactic acidosis kufanele sibhekwe njengokusetshenziswa kwe-biguanides.Ngakho-ke, ngokuvamile abanesifo sikashukela basebenzisa iMetformin. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi esimweni esethuliwe, izimpawu zesifo zenziwa ngokuqondile ezigulini ezinjalo ezisebenzisa ngasikhathi sinye izidakamizwa ezithile. Lesi isigaba esinciphisa ushukela ngesakhi esiveziwe ekwakhekeni.
Lapho kukhona umonakalo ezinso noma esibindini, noma inani elincane lama-biguanides lingavusa i-lactic acidosis.
Isimo esiveziwe sihambisana nokuqongelelwa kwezidakamizwa emzimbeni womuntu.
Ukuze ukhombe i-lactic acidosis kushukela, kunconywa kakhulu ukuthi unake kakhulu izimpawu zokwenziwa kwayo.
Ukubonakaliswa kwe-lactic acidosis ku-diabetesics kungenzeka kungabikho ngokuphelele, futhi ukushintshwa kwesimo ngqo kwifomu elinamandla kungathatha amahora amabili kuya amathathu. Isifo sikashukela siphawula izinhlungu emisipha nakwezinye izimpawu ezingezinhle ezivela ngemuva kwe-sternum. I-Lactic acidosis ibonakala ngokubonakaliswa njengokunganaki, ukukhuphuka kwezinga lokuphefumula. Ukuvela kokuqwasha nobunzima kungenzeka.
Ukuvela kokuhluleka kwenhliziyo kungabizwa ngokuthi uphawu lwakudala lohlobo olunamandla lwe-acidosis. Kunconywa ngokuqinile ukuthi:
ukwephulwa okunjalo kuhlotshaniswa ne-contractility, okuyisimo se-myocardium ngenkathi kusungulwa i-lactic acidosis,
i-lactic acidosis eyengeziwe ingahle ihlotshaniswe nokuwohloka okulandelayo esimweni esivamile,
kodwa-ke, uma kunikezwa ukwanda kwe-acidosis, kubuhlungu esiswini, kanye nokuhlanza, kuyakhonjwa.
Uma isimo esivamile se-diabetesic lactic acidosis (noma, njengoba abanye besho, i-lactic acidosis) sikhuphuka ngokuzayo, khona-ke izimpawu zingashiyana kakhulu. Asikwazi ukukhuluma nge-areflexia kuphela, kodwa futhi ne-paresis (ukukhubazeka kokukhubazeka okungapheli) noma i-hyperkinesis (ukunyakaza okungahleliwe kwemisipha ehlukahlukene).
Izimpawu zokukhishwa nge-lactic acidosis
Ngaphambi nje kokuqala kokwehla komthambo, okuhambisana nokuphelelwa yithemba, umuntu onesifo sikashukela angakhonjwa ngokuphefumula okunomsindo onemisindo engafani nalutho ngaphakathi kwenqubo yokuphefumula. Kuyaphawuleka ukuthi iphunga lesici se-acetone alicunuli i-lactic acidosis. Ngokuvamile, ukuphefumula okunjalo kwakhiwa ngohlobo lwe-2 okuthiwa yi-metabolic. Ukunakwa kufanele futhi kukhokhwe ekuokomeni kolwelwesi lulonke nendawo yolimi, isibalo sesikhumba ikakhulukazi, okungakhombisa ukuqala kokwehla komzimba.
Izindlela zokuthola i-lactic acidosis kuma-diabetes
Izindlela zokuxilonga ze-lactic acidosis nazo zonke izinkomba eziveziwe zingaba nzima. Yingakho izimpawu ze-pathology zizocatshangelwa, kepha njenge-asizayo eguquguqukayo. Ngokunikezwe lokhu, kunconywa kakhulu ukuthi unake iqiniso lokuthi iyidatha ye-elebhu enokwethenjwa okwanelisayo, okususelwa ekuboneni kwezinkomba ze-lactic acid egazini.
Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe kufanele bakhombe izinkomba ezinjengokwehla kwenani le-bicarbonate egazini, izinga le-hyperglycemia elinganiselayo, kanye nokungabikho kwe-acetonuria.
Kungemva kwalokhu lapho kuzokwazi ukuqala inkambo yokulungiswa okugcwele ngokuphelele, futhi kunconywa ukuthi ngezikhathi ezithile kwenziwe amasheke aphindaphindwe ukuqapha isimo.
Ngezimpawu ze-pathology ne-lactic acidosis uqobo, ukunakekelwa okuphuthumayo kuzobandakanya ukuphathwa kwe-intravenous kwesisombululo se-sodium bicarbonate (4% noma 2,5%). Amavolumu alindelekile kufanele abe ngamalitha amabili ngosuku. Kunconywa kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi ubheke isilinganiso se-pH ne-potassium egazini.
Ngaphezu kwalokho, phambi kwe-lactic acidosis kanye nezimpawu zayo, ukwelashwa kwe-insulin kwethulwa njengesilinganiso sokutakula. Ekhuluma ngempatho, kunconywa kakhulu ukuthi unake iqiniso lokuthi:
ingaba ngezinhlobo ezimbili, okungukuthi, i-algorithm ye-genetic eveza i-algorithm noma i-monocomponent therapy ngokusebenzisa "insulin" emfushane,
ekwelashweni kwezimpawu ze-lactic acidosis kushukela, ukusetshenziswa kwe-carboxylase ngezindlela zokudonsa kuvunyelwe. Lokhu kuyiqiniso lapho kwethula cishe ama-200 mg ngamahora angama-24,
Ukwelashwa kuzoba nokulawulwa okuphathelene ne-plasma yegazi nokusetshenziswa kwesilinganiso esincane se-heparin.
Konke lokhu kufanele ngokuzayo kube nomthelela kulungiswa kwe-hemostasis. . Ukuze isifo sikashukela i-lactic acidosis singahambelani nokukhula kwezinkinga futhi singakhuphi isimo sesifo sikashukela sisonke, kunconyelwa kakhulu ukubhekana nezindlela ezithile zokuthibela.
Yiziphi izindinganiso zokuvimbela isifo sikashukela lactic acidosis?
Umgomo oholayo wezinyathelo zokuvimbela izifo ezethulwe kufanele ubhekwe njengokubandlululwa kwamathuba okuba nesibindi. Kunconywa kakhulu ukuthi uvikele noma yini engahle ihlotshaniswe ne-hypoxia. Ngaphezu kwalokho, ukucabanga kokulawula ngesikhathi sikashukela i-mellitus, noma ngabe kuluhlobo lokuqala noma lwesibili, akunikezwa ukubaluleka kohlaka lokuvikela.
Kuyaphawuleka ukuthi i-lactic acidosis, izimpawu eziphambili zazo, njengoba kushiwo ngaphambili, zingavela lapho kusetshenziswa ama-biguanides, zidinga ukunquma kahle imithamo yazo. Lokhu kudingekile ikakhulu ngokukhanselwa okusheshayo uma kwenzeka kwenzeka ukuthuthukiswa kwezifo ezithinta umzimba, ngokwesibonelo, nge-pneumonia.
Ngakho-ke, i-lactic acidosis yisimo esingemnandi kakhulu se-pathological esingahambisana noshukela.
Imvamisa, it, kanye nazo zonke izibonakaliso, kuba ngokungazelelwe futhi ngokushesha, kuvuse inkanuko. Kungakho kubaluleke kakhulu ukunaka izimpawu zesimo ngesikhathi futhi unganaki ukwelashwa okufika ngesikhathi - konke lokhu kuzosusa ukuthuthukiswa kwezinkinga nemiphumela ebucayi.
Dlula ISIVIVINYO SAMAHHALA! FUTHA, UZE WONKE WAKWAZI NGEZIHLOBO?
Ukuzula (izinombolo zomsebenzi kuphela)
0 kwezingu-7 izabelo eziqediwe
YINI OZOQALA? Ngiyakuqinisekisa! Kuzoba mnandi kakhulu)))
Usuvele usuphumelele isivivinyo ngaphambilini. Awukwazi ukuqala kabusha.
Kufanele ungene ngemvume noma ubhalise ukuze uqale isivivinyo.
Kufanele ugcwalise izivivinyo ezilandelayo ukuze uqale lokhu:
Izimpendulo ezilungile: 0 kusuka ku-7
Uthole amaphuzu angu-0 kwayi-0 (0)
Ngiyabonga ngesikhathi sakho! Nayi imiphumela yakho!
Ngabe igama elithi “isifo sikashukela” lisho ukuthini empeleni?
Yini i-hormone enganele isifo sikashukela sohlobo 1?
Yisiphi isibonakaliso esingesona esokudla ushukela?
Isiphi isizathu esiyinhloko sokuthuthukiswa kwesifo sikashukela sohlobo 2?
I-Lactic acidosis iyinkimbinkimbi eyingozi, ebangelwa ukuqokelelwa kwe-lactic acid emithanjeni yamathambo, isikhumba nobuchopho, kanye nokuthuthukiswa kwe-metabolic acidosis. I-Lactic acidosis icasisa ukuthuthukiswa kwe-hyperlactacidemic coma, ngakho-ke lokhu kugula kuyasebenza phakathi kweziguli ezinesifo sikashukela mellitus, okufanele zazi izimbangela zesimo se-pathological.
I-lactic acidosis ikhula kanjani
Ukubandakanyeka okukhulu lapho i-lactate ingena ngokushesha egazini yi-acid acid. I-lactic acidosis yohlobo 2 sikashukela i-mellitus ingenzeka ngemuva kokusetshenziswa kwemithi enciphisa ushukela . Lokhu kusabela okucishe kufane kumalungiselelo ezinhlobonhlobo ze-Biguanide (Metformin, Bagomet, Siofor, Glyukofazh, Avandamet). Isimo sihlukaniswe izinhlobo ezimbili:
Thayipha i-lactic acidosis - i-tishu hypoxia. Umzimba awunayo i-oksijini ezifweni ezibucayi: i-sepsis, ukushaqeka kwe-septic, izigaba ezinzima zesifo sesibindi noma ngemuva kokuzivocavoca kakhulu komzimba.
Uhlobo B lactic acidosis aluhlangene ne-hypoxia yezicubu zomzimba. Kwenzeka ngesikhathi sokwelashwa ngezidakamizwa ezithile ezilwa nesifo sikashukela nokutheleleka nge-HIV. I-Milk acidosis yalolu hlobo ivame ukuzibonakalisa iphikisana nesizinda sotshwala noma izifo zesibindi ezingalapheki.
I-lactic acidosis yakhiwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwezinqubo ze-metabolic zomzimba. Isimo se-pathological senzeka lapho:
Thayipha isifo sikashukela sesi-2.
I-overdose ye-Metformin (kukhona ukugcwala kwesidakamizwa emzimbeni ngenxa yomsebenzi we-renal okhubazekile).
Indlala ye-oksijini (hypoxia) yemisipha ngemuva kokuxineka ngokomzimba . Lesi simo somzimba singesesikhashana futhi sidlula sodwa ngemuva kokuphumula.
Ukuba khona kwama-tumor emzimbeni (malignant or benign).
I-Cardiogenic noma i-hypovolemic shock.
Ukushoda kwe-Thiamine (Vit B1).
Umdlavuza wegazi (i-leukemia).
Izifo ezithathelanayo nezivuvukelayo ze-etiologies ezahlukahlukene.
Ukuba khona kotshwala,
Ukuhlonza amanxeba emzimbeni wesifo sikashukela.
I-infraction ye-myocardial esebenzayo.
Isifo sesibindi esingamahlalakhona.
Ukwelashwa ngemishanguzo yokutheleleka nge-HIV. Leli qembu lezidakamizwa linikeza umthwalo omkhulu emzimbeni, ngakho-ke kunzima kakhulu ukugcina izinga elijwayelekile le-lactic acid egazini.
Izimpawu ze-lactic acidosis
Ubisi lwe-Milk acidosis ngesivinini sombani, ngokoqobo emahoreni ambalwa. Izimpawu zokuqala ze-lactic acidosis zibandakanya:
Ubuhlungu emuva kwe-sternum kanye nemisipha yamathambo,
ulwelwesi olomile nolusu,
kuphuzi kwamehlo noma kwesikhumba,
ukubonakala kokuphefumula ngokushesha,
ukubonakala kokushona nokuqwasha.
Uhlobo olunzima lwe-lactic acidosis esigulini lubonakaliswa ukwehluleka kwenhliziyo. Ukwephulwa okunjalo kubangela ushintsho ekuqaphelekeni kwe-myocardium (inani lezinkinga zenhliziyo lenyuka). Ngaphezu kwalokho, isimo esijwayelekile somzimba womuntu siya ngokuya sikhula, izinhlungu esiswini, isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo kanye nokuntuleka kwesifiso sokudla. Ngemuva kwalokho kufakwa izimpawu ze-neurological ze-lactic acidosis:
i-areflexia (ikhombisa eyodwa noma ngaphezulu ayikho),
I-hyperkinesis (ukunyakaza kokuzenzela kokuzenzakalelayo kokukodwa noma kweqembu lemisipha),
i-paresis (ukukhubazeka kokungapheleli).
Ngaphambi kokuqala kokusebenza komqondo we-hyperlactacidemic coma, kuvela izimpawu zokuphefumula okujulile futhi okunomsindo (imisindo ibonakala ngokusobala kude), ngosizo umzimba oluzama ukususa i-lactic acid emzimbeni, bese kuvela i-DIC - syndrome (intravascular coagulation). Bese kuba nezimpawu zokuwa: okokuqala, i-oliguria iba (ukuncipha kwenani lomchamo), bese kuba ne-anuria (akukho ukuchama). Imvamisa kuba khona ukubonakala kwe-hemorrhagic necrosis yeminwe yemikhawulo.
Ukwelashwa kwe-lactic acidosis
Lapho kuvela izimpawu ze-lactic acidosis, usizo lokuqala lomzimba womuntu luyadingeka, oluqukethe ukuphathwa kwe-intravenous (ngokusebenzisa i-dropper) ye-4% noma i-2,5% isodium bicarbonate solution (kufika ku-2000 ml ngosuku). Ukwelashwa, kusetshenziswa isikhathi eside i-insulin Therapy noma i-monocomponent therapy ene-insulin esebenza ngokubambisana. Esikhungweni sezokwelapha, amalungiselelo e-carboxylase asetshenziswa ngokungeziwe (i-intravenous drip - 200 mg ngosuku). Ngaphezu kwalokho, kukhishwa isixazululo se-reopoliglyukin, i-plasma yegazi, i-heparin (kumithamo emincane).
I-Lactic acidosis iyinkimbinkimbi eyingozi, yize ingajwayelekile. Lesi sifo senzeka lapho okuqukethwe kwe-lactic acid esegazini kuqongelela, kudlula okujwayelekile.
Elinye igama lalesi sifo yi-lactic acidosis (ukuguquguquka kwezinga le-acidity). Ku-mellitus yesifo sikashukela, le nkinga iyingozi kakhulu, ngoba iholela ku-hyperlactacidemic coma.
Umuthi ubeka ukuxilongwa kwe- “lactic acidosis” uma ukugcwala kwe-lactic acid (MK) emzimbeni kudlula i-4 mmol / l.
Ngenkathi izinga elijwayelekile le-acid (elinganiswa ku-mEq / l) kwegazi le-venous lisuka ku-1.5 liye ku-2-2 kanti igazi elenzelwa wona lisuka ku-0,5 liya ku-1,6. Umzimba ophilile ukhiqiza i-MK ngenani elincane, bese isetshenziswa ngokushesha, yakha i-lactate.
I-Lactic acid inqwabelana esibindini futhi iphule phansi ibe yimanzi, i-carbon monoxide ne-glucose. Ngokuqongelela kwenani elikhulu le-lactate, ukuphuma kwayo kuyaphazamiseka - i-lactic acidosis noma ukuguquka okubukhali kwendawo ye-acidic kwenzeka.
Lokhu kukhuphuka kusukela i-insulin ingasebenzi. Ngemuva kwalokho, ukumelana ne-insulin kukhuthaza ukukhiqizwa kwama-hormone akhethekile aphazamisa i-metabolism yamafutha. Umzimba ukhubazekile, ukudakwa kwawo kanye ne-acidosis kuyenzeka. Ngenxa yalokho, kwakheka i-hyperglycemic coma. Ukudakwa okujwayelekile kuyinkimbinkimbi nge-metabolism engafanele.
Inani elikhulu lemikhiqizo ye-metabolic buthelela egazini futhi isiguli sikhononda:
ukudangala kohlelo oluphezulu lwezinzwa.
Lezi zimpawu zingadala ukufa.
Lesi sifo sizibonakalisa singazelele, sikhula ngokushesha okukhulu (amahora amaningi) futhi ngaphandle kokungenelela kwezokwelapha okufika ngesikhathi kuholela emiphumeleni engenakuphikwa. Ukuphela kwesimpawu esibonakalayo se-lactic acidosis Ubuhlungu bemisipha, yize isiguli besingenakho ukuzikhandla ngokomzimba. Ezinye izimpawu ezihambisana ne-lactic acidosis ku-mellitus yesifo sikashukela zingahle ziqhamuke kwezinye izifo.
Njengomthetho, i-lactic acidosis kushukela ihambisana nezimpawu ezilandelayo:
isiyezi (ukulahleka kokuqwashisa okungenzeka),
buthaka amakhono emoto
ukuchama kancane, kuze kube yilapho kuyeka ngokuphelele.
I-lactate ikhuphuka ngokushesha futhi iholela ku-:
ukuphefumula okunomsindo, kwesinye isikhathi kuphenduke ukububula,
ukungasebenzi kwenhliziyo, okungaqedwa ngendlela ejwayelekile,
ukwehlisa (ukubukhali) umfutho wegazi, ukuhluleka kwesigqi senhliziyo,
ukungqubuzana kwemisipha yokuzithandela (iminyakazo),
ukuphazamiseka kwegazi. Isifo esiyingozi kakhulu. Ngisho nangemva kokuba izimpawu zokuphela kwe-lactic acidosis zinyamalale, amahlwili egazi ayaqhubeka nokuhamba emithanjeni futhi angadala ukuchitheka kwegazi. Lokhu kuzodala i-necrosis yomunwe noma kuvuse i-gangren,
indlala yomoya-mpilo yamangqamuzana obuchopho athuthukisa i-hyperkinesis (injabulo). Ukunakwa kwesiguli kuhlakazekile.
Kube sekwenzima ukhezo. Lesi yisigaba sokugcina ekwakhekeni kwalesi sifo. Umbono wesiguli uyancipha, izinga lokushisa lomzimba lehla laya kuma-35.3 degrees. Izici zobuso besiguli ziyalolwa, ukuchama kuyaphela, aphele amandla.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izimpawu zokuqala zesifo zidinga ukulaliswa esibhedlela ngokushesha. Ngokushesha lapho kuqala ukuvela kwezinhlungu zemisipha, udinga ukukala ushukela bese ushayela i-ambulensi!
Ungathola ukuthi isifo sikashukela esinezinkinga sibangelwa yini yile vidiyo:
Ukufaka isicelo sosizo lwezokwelashwa ngesikhathi, ungonga impilo yakho. I-Lactic acidosis iyinkinga edidayo engabekezeleleki emilenzeni. Isiqephu esinolwazi ngempumelelo lwe-lactic acidosis coma siyimpumelelo enhle isiguli. Kumele kwenziwe yonke imizamo ukuvimba ukuphinda kwesigameko. Le nkinga ibhekelelwa yi-endocrinologist. Udokotela kufanele abonane ngokushesha ngemuva kokuthola inani eliphakeme le-acidity ezicutshini.
Ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis kushukela kwenzeka emahoreni ambalwa, futhi akukho ukubonakaliswa okusobala komtholampilo. Isiguli singazizwa ngokulandelayo:
ukozela noma ukuqwasha,
Ubuhlungu emuva kwe-sternum
Izimpawu ze-dyspeptic (isicanucanu, ukuhlanza, ukushisa kwenhliziyo).
Mina.lezo zimpawu ezingabonakala ezigulini eziningi zikwenza kube nzima ukuthola ukuxilongwa.
Kungekudala, ngenxa yokwanda kwe-acidosis, izimpawu zokwehluleka kwenhliziyo ziqala ukwanda. Okwamanje, kwenziwa izinguquko ezihlelekile kwezicubu ze-myocardial, ezibonakaliswa ngokungahambisani nomsebenzi wakhe wesivumelwano.
Ngokuqhubeka kwenqubo ye-pathological, isimo esivamile sesiguli sihlupheka, kuvela izinhlungu esiswini. Izimpawu zemizwa ezingena ngokushesha zijoyina - i-areflexia ne-paresis, kuze kufike ku-hyperkinesis.
Isigaba sokugcina se-pathogenesis ye-lactic acidosis yi-coma. Isikhathi esedlule ngaphambi kokuthuthukiswa kokwehla komzimba sibonakaliswa ngokulandelayo:
isikhumba esomile nezicubu zomzimba zesiguli,
ukuphefumula okunomsindo okuzwakala kukude (Ukuphefumula kukaKussmaul).
Ngokuqina kokuqina kokwehla kwezimpawu, kuqubuka izimpawu zokuwohloka, nomsebenzi wokulimala we-renal (oligoanuria, olandelwe yi-anuria). Imvamisa lezi zinqubo zihambisana ne-DIC (intravascular coagulation), ekhonjiswa ku-intravascular thrombosis futhi kamuva iholele kwi-hemorrhagic necrosis emunweni wemikhawulo.
I-Lactic acidosis ingabonakala ngokuhlolwa kwegazi okubonisa okuqukethwe okweqile kwe-lactate, ukwehla kwezinga le-bicarbonates kanye ne-alkalinity yokubhuka.
Le nkinga yesifo sikashukela idinga ukunakekelwa ngokushesha kwezokwelapha. Amasu okuqala kufanele ahlose ukuqeda umbuthano onobubi owakhiwe, futhi kulokhu kuyadingeka:
Ukwenza i-pH yegazi iguquguquke ngokwejwayelekile futhi ivuse isenzo se-lactic acid, kuvame ukusetshenziswa isisombululo se-sodium bicarbonate (soda). Isixazululo sifakwa ngaphakathi, hhayi ngaphezulu kwamalitha ama-2 ngosuku, ngaphansi kokuqukethwe kwe-potassium esegazini kanye noshintsho lwe-pH. Ngemuva kwalokhu, ukwelashwa kwe-detoxification kwenziwa, okubandakanya okulandelayo:
ukuphathwa kwe-plasma yegazi,
imithamo emincane ye-heparin yokuqeda i-DIC.